Ndezvipi Instagrammable Places In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Ndezvipi Instagrammable Places In Europe
Vatariri nechitima anogona kuva imwe yenzira dzakanakisisa wanikidza mutsva nyika - vakazorora mu mungoro yenyu, ndichiona girl kufamba maererano. Ndivo zvakare nzira yakanakisisa kusvika The kupfuura Instagrammable nzvimbo Europe!
Kana totaura kufamba, yenyu runhare chinonyanya zvechokwadi kwose kwose muri – kutora mifananidzo uye mavhidhiyo kuti kutamba dzakawanda filters nemashoko anotsanangura. Zvemakore pakufamba kwenyu, yenyu zororo, ndiyo nzira huru yokuita enyu anoshamisa Ndangariro mumaguta, nyika, uye uchigadzira nzira yako kuenda ku dzokugara. Kwete chete unogona kuponesa idzi uye kutarira shure pamusoro pavo ramangwana, asi iwe unogona kushandisa Instagram kugoverana nguva izvi neshamwari dzako.
asi, varipi kupfuura Instagrammable nzvimbo Europe? In usingafi mashoko Cady Heron kubva Vasikana vaneutsinye, kana totaura uwandu Instagrammable mikana, muganhu hakuwaniki.
The kupfuura Instagrammable nzvimbo Europe: The Venice Simplon-Dzokumabvazuva-Express: London - Venice
Tiri kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe pano. Izvi hazvisi chete mumwe vakawanda yakakurumbira chitima mabasa munyika asi ndiyewo Instagrammable nzvimbo Europe. Kunyange zvazvo pane zvishoma yakasiyana migwagwa aungatora, chinonyanya dzakakurumbira ndiyo London kuna Venice rwendo. Kamwe uine chitima yako Venice, tichibatsirwa Save A Train, zvaunogona kusarudza hazviperi!
The Rialto Bridge mumwe mabhiriji mana chete kuyambuka Venetian Grand Canal, izvo zvinoreva kuti zvakaoma chaizvo kuti mufananidzo pasina vanhu pamusoro payo. Imwe nzira - sezvo zvose izvi nzvimbo - ndiko kushanyira mangwanani kwazvo mangwanani.
I chokwadi munhu kunosiya guta pasina kuwana nepikicha Grand Canal. Ndicho chii chinoita Venice, tsime, Venice! Imwe yakanakisisa maonero zviri kubva pamusoro Rialto Bridge.
The kupfuura Instagrammable nzvimbo Europe: The Bernina Express: Switzerland - Italy
Kufamba pakati Chur mu Siwizarendi uye Tirano mu Itari, ari 122km rwendo anotora iwe kuburikidza dzinokatyamadza Swiss Alps. Perfect nokuti Instagram!
Kamwe waita akasvika Switzerland, heano kupfuura Instagrammable nzvimbo:
THE TOBLERONE PAGOMO
Ko gomo iri kutarisa akajairwa? Kana kumboziva kudya mumwe Toblerone bhaa, kuti zvimwe chikonzero! Ndiyo gomo izvo zvinoratidzwa pane kurongedza uye ndosaka zviri pane yedu runyorwa rweNzvimbo dzinonyanya kugadzikana muEurope.
Kuti tiwane chete bara pazasi, kutora Gornergrat chitima kubva Zermatt yose nzira kumusoro, zvino kufamba wenharire pfungwa (apfuura hotera).
muromo: kuti muzvitoro muna Zermatt kazhinji kudzingwa Toblerone nembariro kuti bara ichi chaiwo! Saka kana uchida bara ichi uye havadi kutora mikana yako zvino nechokwadi ukatenga usati kusvika Zermatt.
Kana uri pano kuti ushingi (i.e.. paragliding) zvino hapana mubvunzo unenge mukakachurwa vamwe yakakura Instagram kwepfuti. Regai sokuti ndichifumira neBP yako? Unogona kuwana inotonhorera pena kubva pamusoro kuoma Kulm. Uchafarirwa. Zvaifadza maonero pamusoro guta Interlaken uye Swiss Alps.
The kupfuura Instagrammable nzvimbo Europe: The Brocken Railway. Harz Mountain Range, Jerimani
On ichi kunyanya nzira, uchaita vanokwira 1,142m-soro Brocken, gomo rakareba kuchamhembe Jerimani, kunakidzwa Panoramic maonero dzakapoterera cree. asi, haufaniri kuita chete akaita kukwira gomo kushanyira Mountains Harz. Saizvozvo, zviri nani kana uchifarira toyi maguta pamwe fairytale nematende, UNESCO World Heritage Sites, nhare, uye dzimba dzemamongi kubva pazera repakati, kana kuona mhuka dzesango munzvimbo yadzo yepanyama. Perfect wako Instagram zvokudya!
Leipzig kuna Wernigerode Brocken Zvitima
Hanover kuna Wernigerode Brocken Zvitima
Munich kuna Wernigerode Brocken Zvitima
Berlin kuna Wernigerode Brocken Zvitima
Visit Collegiate Church, kasitoro, uye Old Town yeQuedlinburg
With wemishonga Grunderzeit uye Art Nouveau dzimba, Old Town pamusoro Quedlinburg inoita chimwe The kupfuura Instagrammable nzvimbo Europe. Ndiyo nhamba uye hwaivapo zvivako matanda-azviveza kuti vagutsikane UNESCO kuzivisa Quedlinburg rakasiyana muenzaniso guta Ages European.
Leipzig kuna Quedlinburg Zvitima
Hanover kuna Quedlinburg Zvitima
Munich kuna Quedlinburg Zvitima
Berlin kuna Quedlinburg Zvitima
Mumugwagwa West Highland Line, ari Jacobite Steam Train rinofanira kunge zvakanakisisa kuzivikanwa basa nayo achitamba mune Harry Potter mabhaisikopu - sezvo Hogwarts Express. The chitima anomhanya rwemakiromita 84 tatamuka raiparadzanisa Fort William kubva Mallaig pamusoro West Highland Railway Line. Chiri kazhinji vaimudana mumwe mukuru njanji nzendo munyika, uye kodzero saka!
Ngatitarise vamwe pics unogona mukakachurwa pachako!
The kupfuura instagrammable nzvimbo Europe: The Yellow Train, Furanzi
Iti 'Hongu’ kuti rwendo urwu! Kwenguva inopfuura zana remakore, ichi mita-geji yeyero chitima yave ichitenderera nzira kwayo kuburikidza French ichindosvika kuPyrenees kubva Villefranche-de-Conflent kuna Latour-de-Carol. Chii isina iri kure - zviri maawa 63km chete uye inenge mitatu refu - kupfuura zvinoita kumusoro zvachose Instagrammable maonero. Makomo kunoshamisa of Parc Naturel Regional of ichindosvika kuPyrenees Catalanes ari mumwe wavo!
It Anodzivisawo pana France-soro kuchiteshi chechitima, Bolquere-Eyne. Iyo agere 1592m pamusoro pegungwa, uye chinoyambuka Pont Gisclard, njanji kuturika.
Akamurairawo kuti parunhare uye kunatsurudza yenyu Instagram Anwendung. Ndiyo nguva yokuti bhuku tikiti achibatsirwa Save ATrain uye tora mukakachurwa!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)